मन्त्रालयले लकडाउन खोल्ने मिति तोक्यो – List Khabar
Home / समाचार / मन्त्रालयले लकडाउन खोल्ने मिति तोक्यो
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 360 Views
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको आज एक महिना पुगेको छ । जेठ २० गतेसम्म कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था न्यूनीकरण गर्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी छ ।निषेधाज्ञा कहिले खुल्छ टुंगो छैन । पछिल्लो एक सातायता उपत्यकामा संक्रमण र मृत्युदर दुवै घट्दो क्रममा छ । जुन सकारात्मक संकेत हो । एक साताअघिसम्म उपत्यकामा संक्रमण दर औसतमा तीन हजार बढी दैनिक थियो अहिले त्यो संख्या दुई हजारको हाराहारीमा छ । **अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
त्यही समयदेखि उनीहरुको बोलीचालीको शुरुवात भयो । बिस्तारै बिस्तारै बोल्ने क्रम बढ्दै गएपछि नीतु र दिपेन्द्रबीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ नै बन्दै गयो । सम्बन्धले एउटा प्रेमको रुप लिंदै गएपछि उनीहरुले बिहे पनि गरे । सबै कुरा ठीक हुँदै थियो । तर अचानक दिपेन्द्रले नीतुलाई छाडिदिए । किन छाडे ? के भयो त्यस्तो ? यो विषयमा नीतु के भन्छिन्
Previous अक्सिजनको मात्रा राम्रो बनाउन घरमा रोप्नु पर्ने यी साना वनस्पतिहरु बारेमा थाहा छ ? सबैले जानी राखौं
Next खाने तेलकाे मूल्य बढ्नुकाे भित्रि कारण यस्ताे रहेछ !